Arthur oo dhammeystiray ku biiristiisa Juventus… (Goormee ayay Bianconeri si rasmi ah u shaacin doontaa?) – Gool FM
(Turin) 29 Juun 2020. Laacibka kooxda Barcelona khadka dhexe kaga ciyaara ee Arthur Melo ayaa dhammeystiray ku biirista kooxdiisa cusub ee Juventus kaddib markii uu tijaabada caafimaadka shalay ku maray magaalada Turin.
Laacibka reer Brazil ayaa qalinka ku duugay heshiis shan sano ah oo uu ku sii joogi doono waqooyiga dalka Talyaaniga.
Bianconeri ayaa la rajeynayaa inay si rasmi ah u shaaciso saxiixa Arthur berri oo ay taariikhdu ku beegan tahay 30-ka bisha Juun.
Miralem Pjanic ayaa isaguna la rajeynayaa inuu dhammeystiro heshiiska uu dhanka kale ku aadayo, isagoo tijaabada caafimaadka isla shalay maray, waxaana goobjoog u ahaa dhakhtarka naadiga Barca.
23-jirka kubadda sameeya ayaa maanta ku soo laabtay tababarka kooxdiisa, waxaana xiddigaha saaxiibbadiisa ah uu u sheegay inuu dadaalkiisa oo dhan galin doono Blaugrana ka hor inta uusan ka dagin albaabka garoonka Camp Nou.